Wasiirka waxbarashada ee dowladda Puntland oo beeniyay eedayn uga timid culimada diinta qaarkood – Radio Daljir
Garowe, Mar 31- Wasiirka waxbarashada ee dowladda Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa ka hadlay eedayn ay culimada diinta ee Puntland usoo jeediyeen wasaaradiisa, taasoo salka ku haysa wasaaraddu inay manaahij aan waafaqsanayn shareecada islaamka ay ka hirgalisay deegaanada Puntland.
Wasiirka, oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay inaysan suurto gal ahayn wasaaradda waxbarshada ee Puntland inay manaahij diinta iyo shareecada islaamka aan waafaqsanayn inay ka hirgeliso deegaanada Puntland.
Waxaa uu sheegay eedaymaha loo jeedinayo inay yihiin kuwa aan daraasad ku dhisnayn oo kasoo yeertay dad iyagu wax cadayn ah aan haynin.
Wasiirka Juaxa, ayaa sheegay wasaaradda waxbarshada inay ku howlantahay barnaamijyo lagu dejinayo siyaasadda guud ee waxbarshada.
Mar wax laga weydiiyay, kaalintii ay dowladda Puntland ku lahayd fursadaha waxbarsho ee dibadda loogu qaaday arday Soomaaliyeed oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxaa sheegay inaysan wax kaalin ah ku lahayn deeqihii ugu dambeeyay ee waxbarsho.
Wasiirka waxaa uu tilmaamay deeqaha waxbarsho inay kala hadleen madaxda wasaaradda waxbarshada, islamarkaana ay rajaynayaan in wax laga qabto hanaanka lagu maamulo deeqaha waxbarsho.